ကိုဩဒိနိတ်: 16°46′N 94°43′E
ပုသိမ် ဟူသောဝေါဟာရ၏ အစမှာ အာရပ်၊ အိန္ဒိယ ကုန်သည်များမှ အစပြုခဲ့ခြင်း ဟုလည်းဆိုသည်။ အာရပ်/ပါရှန်း ကုန်သည်များ များပြားရာ မြို့ဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာဘာသာဖြင့် "ပသိ" (မြန်မာမွတ်စလင်မ်မြို့) ဟု ခေါ်တွင်ရာမှ ကာလကြာသော် ပုသိမ်ဟူ၍ ဖြစ်လာခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
မော်တင်စွန်းဘုရား နှင့် ကမ်းခြေ
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ(၆)၊ စာ ၃၄၉-၅၂။
James Gray, ed. (1892). Buddhaghosuppatti. London: Luzac & Company. p. 11.
သမိုင်းပါမောက္ခ ဒေါက်တာကျော်ဝင်း(ငြိမ်း) ရေး၊ ညောင်ရမ်းမင်းသား၏ နောက်ဆုံးနေ့ရက်များနှင့် အခြားစာတမ်းများ၊ စာ-၃၉၊ ၂၀၁၅၊ ဒီဇင်ဘာ
Dictionary of Modern Spoken Mon by H.L. Shorto (1962, Oxford University Press)